Ebee ka Linux jiri rụọ ọrụ na desktọọpụ PC? Na Latin America, nwanne! | Site na Linux
Ebee ka Linux jiri rụọ ọrụ na desktọọpụ PC? Na Latin America, nwanne!
Banyere free software map na anyị bipụtara ụbọchị ole na ole gara aga, ụfọdụ ndị na-agụ akwụkwọ nwere nghọta kwuru, echere m n'ezi ihe kpatara ya, na Cuba apụtaghị nke ọma. Nnyocha anyị na-eweta n'isiokwu a na-akwado echiche a. Nke bụ eziokwu bụ na Cuba, yana Venezuela na Uruguay bụ mba a na-ejikarị Linux arụ ọrụ na PC desktọọpụ.
Ọ ga-eju gị anya ịchọpụta na - mgbe niile na pacenti na ọnụ ọgụgụ ndị PC PC desktọọpụ na mba ahụ ọ bụghị n'okwu zuru oke - Zimbabwe, Mozambique, Macedonia, Uganda, Ethiopia, Kenya na Finland karịrị Spain, European mba nke kachasị ndị Linux ọrụ.
Linux bụ sistemụ arụmọrụ nke nwere onye na-eguzosi ike n'ihe, onye ọrụ na isi ihe mmemme, mana ọ ka dị asọmpi azụmahịa na kọmputa nkeonwe. N'ebe ahụ Windows na-eduga.
Otú ọ dị, obere Linux na-enweta ohere n'ọhịa nke oriri na otu n'ime mpaghara ndị na-eme ka uto a bụ Latin America.
Dabere na Royal pingdom - saịtị mara maka mkpokọta mgbakọ na mwepụ na mpaghara teknụzụ- Cuba, Venezuela na Uruguay nọ n'ọnọdụ atọ mbụ n'ụwa mgbe ọ na-abanye na Linux na kọmputa kọmputa.
Nọmba Linux na ụwa ka dị ala, ọkachasị ma ọ bụrụ na mmadụ echee na obodo kachasị jiri ya bụ Cuba nwere 6,33% nke ndị ọrụ obodo.
1 Latin kpatara
2 E wezụga kọmputa
Mana gịnị kpatara mba Latin America ji jiri Linux arụ ọrụ na kọmputa nkeonwe?
"Ihe dị na Cuba, Venezuela na Uruguay dị ezigbo iche, yabụ na ọ na-esiri ike ịchọta ihe kpatara ya nke na-akọwa ihe ịga nke ọma nke Linux, ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume ịchọpụta ihe ndị doro anya na emetụtala nnabata ya," ọ gwara BBC Mundo Tomás Laurenzo, onye na-eme nchọpụta na injinia na Uruguay.
Laurenzo kwuru nkwalite na gọọmentị nke mba ndị a enyela Linux na ịmụta sistemụ site na agụmakwụkwọ.
Dịka ọmụmaatụ, o hotara nkesa Cuban kesara sistemụ arụmọrụ, nke a na-akpọ Nova, nke ụmụ akwụkwọ mepụtara ma mesịa gọọmentị nabatara ma kwado ya.
Na-ekwu maka Cuba na Venezuela, ọ dị mfe ịchọta isi nzute n'etiti echiche osi ekpe na iji ngwanrọ mepere emepe, ọkachasị mgbe nke ahụ na-enye ohere ka ọ ghara iji sọftụwia sitere na mba US ", ka osote prọfesọ na Institute of Computing na Mahadum Republic dị na Uruguay na-ekwu.
Banyere mba ndị dị na Southern Cone, Laurenzo kwenyere na enwere ike ịkọwa ya site na "ọkwa dị elu nke mmuta kọmputa, ịbụ - pasent- nnukwu onye na-eme ngwa ngwa nke ngwanrọ."
Isi okwu ọzọ enwere ike ịtụle - ọ bụ ezie na ọ ka siri ike ịlele - bụ nnabata nke gọọmentị Uruguayan maka mmemme One Laptop Per Child (OLPC).
Ikekwe ewezuga Uruguay na Finland, Na mba ndị ọzọ nke iri na-ejikarị Linux arụ ọrụ, isi ihe yiri ka ọ bụ eziokwu na sistemụ arụmọrụ bụ n'efu na n'efu.
Site na itinye sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, mba ndị a na - ekwe - opekata mpe n’ọfịs ọha na eze na ụlọ akwụkwọ - ndị mmadụ nwere ike iji teknụzụ na-enweghị mkpa ịkwụ nnukwu ego maka ikikere.
Ma mmetụta nke Linux na kọmputa nkeonwe ka dị ala. Ọbụna na Cuba, ọnụ ọgụgụ ahụ na-egosi na ihe karịrị 93% nke kọmputa anaghị eji usoro n'efu.
Ọkachamara ahụ kwukwara, sị, "Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iche na ụgwọ dị ala nke iji Linux nwere ike itinye, tinyere ịnabata usoro iwu gọọmentị na agụmakwụkwọ, bụ ihe ndị nwere ike ịmetụta mba niile nke mpaghara ahụ."
Mana ọ dọrọ aka na ntị: "N'ọnọdụ ọ bụla, anyị agaghị efunahụ echiche, ihe kpatara nke na-akwado nnabata nke MS Windows ka dị mkpa, a ga-akwagide ya na oge nkesa."
E wezụga kọmputa
Windows na-aga n'ihu na-achịkwa usoro sistemụ arụmọrụ na ụwa karịa 90% nke òkè ahịa. Na mba dịka United States ma ọ bụ United Kingdom, iru Linux dị n'okpuru 1,20% nke ojiji.
Agbanyeghị, site na ịtụgharị ntakịrị pasent nke ndị ọrụ sistemụ arụmọrụ n'ime ọnụọgụ ezigbo enwere ike ịkọ atụmatụ ahụ ihe dị ka nde mmadụ 20 na-eji Linux na kọmputa nkeonwe ha.
Na mgbakwunye, karịa ọnụọgụ, sistemụ arụmọrụ na-enwetakarị mkpa maka obodo ya nke ndị ọrụ na-eguzosi ike n'ihe na-eji ngwanrọ iji mepụta teknụzụ na mmemme nke mechara nweta mkpa ụwa.
N’echiche ahụ, a na-ahụ Linux ka ihe na-ekpo ọkụ n’echiche.
Ma, karịa ụwa nke kọmputa nkeonwe, Linux nwere oke ahịa ahịa mgbe ọ na-abịa ahịa ihe nkesa (kọmputa ndị na-ejikwa netwọk na data nnabata) na ikekwe ọbụna dị mkpa karị, ma a bịa n’ahịa ekwentị.
Dịka ọmụmaatụ, ekwentị gam akporo Google na-eji Linux arụ ọrụ. Dị ka ụlọ ọrụ nyocha Gartner si kwuo, gam akporo na Linux ga-ejide 38,5% nke ahịa ahụ site na njedebe nke afọ.
Linux bụ ihe ịga nke ọma oru ngo. Na nnukwu ọdọ mmiri nke ndị ọrụ na ọnụnọ karịrị akarị na ọkwa nke sava, netbook na ekwentị, ”na-ekwu Laurenzo.
«Maka Linux iji nweta ọnụnọ ka ukwuu n'ahịa ahụ, ọ dị mkpa ka ndị na-achọsi ike nke ọchịchọ pụta na-agbaji usoro ahụ siri ike. Ọchịchọ a kwesịrị ịgbasi ike iji merie ịdị mma ma ọ bụ mkpa ịgbaso ụkpụrụ de facto.«, Na-emechi ndị na-eme nchọpụta nke Uruguayan.
Ajụjụ bilitere site na akụkọ a bụ: Ebee ka Brazza dị ebe a? Echere, ụmụnna anyị ndị Brazil, nke Lula dị ka onye mma agha ha, bụ otu n'ime ndị na-edegharị akwụkwọ maka sọftụwia n'efu. Ọfọn, ọ bụghị maka ọmụmụ ihe a.
Daalụ Miguel maka inyefe anyị ọkwa a!
Fuentes: BBC World & Royal pingdom
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Ebee ka Linux jiri rụọ ọrụ na desktọọpụ PC? Na Latin America, nwanne!
Mageia 1 wepụtara!: Usoro izizi nke "Community" Mandriva
Ambiance Evolution: ụdị ọhụụ nke isiokwu Ubuntu